Kedu mgbe CAN-SPAM ga-esi gbanwee email gara aga? | Martech Zone
FTC emechila ụfọdụ ndị spammers n'oge na-adịbeghị anya. Spam ka bụ nnukwu nsogbu, ana m enweta ọtụtụ narị ozi kwa ụbọchị. Enwere m ike ịlele ozi ịntanetị (m na-eji MailWasher) mana ịhapụ. Enwere ụzọ ndị ọzọ - iji ọrụ SPAM na-achọ ka onye ọ bụla nye ikike iziga m ozi, mana ọ masịrị m ịnweta.
Ugbu a nsogbu ahụ gbasara. M ga-esi Comment na sochie Spam na m blog. Kwa ụbọchị, m na-abanye ma enwere ozi 5 ruo 10 nke Akismet na-ejideghị. Enweghị mmejọ ha - ọrụ ha ejidela ihe 4,000 na-ekwu SPAMs na blọọgụ m.
Kedu mgbe FTC ga - esonye na ụdị SPAM ndị ọzọ ewezuga email? Echere m na oké tụnyere bụ nke a… M zụrụ a ụlọ ahịa na oké n'okporo ámá na nza nke okporo ụzọ. Ozugbo m banyere na ụlọ ahịa SPAM n’okporo ámá hụrụ m, ha chọrọ inweta ụfọdụ ndị ahịa m. Yabụ - ha na-agbado akwụkwọ mmado na windo ụlọ ahịa m na-akpọsa ụlọ ahịa ha. Ha anaghị ajụ m ikike - ha na-eme ya.
Ọ dịka mmadụ na-agbasa akwụkwọ mmado na ụlọ ahịa m na-akpọsa ụlọ ahịa ya. Gịnị kpatara na iwu akwadoghị ya?
N'ime ụwa n'ezie, m ga-enwe ike ịkwụsị nke a. Enwere m ike ịrịọ onye ahụ ka ọ kwụsị, mee ka ndị uwe ojii jụọ ha ka ha kwụsị, ma ọ bụ n'ikpeazụ m nwere ike ịgba ha akwụkwọ ma ọ bụ boo ebubo. Agbanyeghị, na ,ntanetị, enweghị m ike ịme nke ahụ. Amaara m adreesị nke SPAMMER… Amaara m ngalaba ya (Ebe o bi). Kedu ka m ga-esi ghara imechi ya? O di m ka anyi kwesiri inye anyi otu ndi omekome na omume obodo anyi nyere anyi ma ahia m (blog) bu ezigbo uzo.
Oge erugo ịgbasa iwu na itinye teknụzụ na iwu ndị a. Echere m na SPAMMER IP's kwesịrị igbochi na ndabere na-aga n'ihu site na sava aha na ụwa niile. Ọ bụrụ na ndị mmadụ agaghị agakwuru ha, ha ga-akwụsị.
Tags: nwere ike-spamemailiwu emailftciwu spam